GNOME Shell nwere ọdịnihu? | Site na Linux
GNOME Shell nwere ọdịnihu?
jorgemanjarrezlerma | | Ọdịdị / Nhazi, GNU / Linux
Nke a bụ mmekorita mbụ m na-ebipụta na oghere a ma ọ ga-amasị m ịlaghachi na isiokwu a tụlere n'oge ụfọdụ, ọ bụ banyere Gnome Shell na ọdịnihu ya.
Eziokwu kemgbe m nwere Linux eji m ya Gnome na mgbe m na-ewere ya dị ka ihe bara uru, dị mfe na configurable desktọọpụ. Ọ bụ eziokwu na Shell nke desktọọpụ a ebutela ọtụtụ esemokwu n'ihi na ọ nwere ike iji ya mee ihe, ọ bụrụ na ọ bara uru, ọ bụrụ na ọ nwere ike ịhazi ya, ọ bụrụ nautilus bụ ihe arụ, wdg.
Dịka ọmụmaatụ, KDE ọ bụ ezie na ọ bụ nnukwu gburugburu ebe obibi (Mụ onwe m hụrụ n'anya n'anya ya) O dikwa oke njo ma achoro m asị na eziokwu na ntinye ọ bụla, akara aka ma ọ bụ akara ọ bụla bụ "K".
XFCE Ọ bụ tebụl nwere ụdị nke ya, dị oke njọ ma nwee nnukwu uru, enwere ike ịhazi ya kpamkpam ma ị nwere ike nweta nsonazụ dị egwu na ya.
Lxde y Mepee ha dị ukwuu (M n'ezie na-eji ha na ha Pentium III desktọọpụ PC na 512 Ram na Arch Linux na ọ na-arụ ọrụ dị ukwuu) Ma ọ bụ ezie na enwere ọtụtụ ihe ị ga-eme na njedebe na ọdụ, ọ dịkwa oke nhazi.
Mana banyere isi okwu anyị bịarutere, m na-eji ya GNOME Shell ebe ọ bụ na e gosipụtara ya ọ bụ ezie na n'ụkpụrụ ọ dịtụ "gbagwojuru anya" iji hazie ma hazie ya, ọ na-aga n'ụzọ ịghọ ihe ọ dịlarị, dị mfe, dị irè ma nwekwaa ya. Jiri CSS n'ihi na ọdịdị ya na nchikota ya emechaala nke nta nke nta.
Dị ka KDE, nke n'oge ahụ mgbe ọ gbanwere usoro 4.x mekwara ka a kwuo okwu, GNOME Shell ị nọ n'ọnọdụ yiri nke ahụ. Echere m na mgbanwe na-esiri ike mgbe ụfọdụ, mana ọ bụrụ na anyị ahụ ma nyochaa ụzọ nke ụlọ ọrụ ahụ, ọ na-atụgharị uche na agagharị na ihu na-enwekarị ihu na GNOME Shell Owerela ebe ahụ ma echere m na oge ga-egosi na ọ bụ eziokwu.
Dị ka ihe edeturu, m na-ahụ na KDE na-akwadebe Shell ma ọ bụ ndụdụ yiri nke ahụ pawudaN'ihi ya, mmadụ nwere ike ịjụ, ọ̀ bụ nzuzu na ntị chiri nke obodo? ma ọ bụ Ndi nke a smart ekwentị (ghọta gam akporo na iOS) Na-esetịpụrụ ọkọlọtọ maka tebụl ka ị dịrịkwuo mma ma hụ na mmiri dị n'etiti usoro ntanetị dị iche iche?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Ọdịdị / Nhazi » GNOME Shell nwere ọdịnihu?
Ihe 86 kwuru, hapụ nke gị
Lee, amaghim ma m mee ochie (agbanyeghi na enwere m obi abụọ na m gbara afọ iri abụọ), mana nke ekwe ntị, ozi, netwọkụ mmekọrịta yana webadas niile anaghị eso m, o zuola na ekwentị nwere ike ịkpọ egwu ma kpọọ ihe ọ bụla.
Maka ndị ọzọ enwere PC, mana ọ bụ nkatọ m ma n'ezie shei dị mma ma ọ bụrụ na anyị na-ekwu banyere Ipod, ekwentị, Ipad ma ọ bụ mbadamba, site na ebe ahụ ọbụnadị na netbook bụ ezigbo echiche ma anaghị m ewere ya dị ka ihe bara uru, ana m eme ya enwere ike ịhazi ya ka o wee nọrọ na aka mgbe ọ dị mkpa, ekwesighi ịhazi ya n'ihi na nke ahụ ga-egbu oge mgbe ị na-eme mmemme, ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na ị na-egbusi oge ịhazigharị na imeghari gburugburu ebe obibi mana n'oge ị na-agaghị eji ihe ọ bụla eme ihe na mkpokoro .
Ya mere, echere m na shei dị mma ma ọ bụrụ na ịchọrọ netwọkụ mmekọrịta na ozi, ịgwa gị na enweghịdị m facebook, ọ bụrụ na m jiri twitter ọ bụ n'ihi na ọ nwere kemgbe linux na turpial na-agwa m gbasara isiokwu ha na-ede na m na-esokwa peeji nke Anime iji hụ isiakwụkwọ ndị ha wepụtara taa. XD
Ya mere, ọmarịcha shei mara mma ma ọ naghị arụ ọrụ ọbụlagodi na m.
Mụ na Kde ma ọ bụ lxde ka mma ma ọ bụrụ na akụrụngwa akụrụngwa pere mpe.
Lxde na Kde, na mpụga nke ahụ ma eleghị anya XFCE.
Shell anaghị amasị m ma ọlị. Mana abụ m obere ka ị yikarịrị ka ọ bụ onye ziri ezi, mana opekata m mpe, m gaghị eji shea ọzọ ruo mgbe ọ ga - ahazi ma ọ dịkarịa ala dịka gnome2 ma ọ bụ nwunye.
Ekwesiri ighota na lxde na KDE nwere ike hazie ma hazie karia gnome2 na di na nwunye.
Site ugbu a ha kwuru ya, cinnamon bụ shei enwere ike idozi ya ka ndị ọzọ wee soro ya, ma ọ dịkarịa ala maka m.
N'ozuzu m kwenyere na gị, mana eziokwu ahụ na ịbụ nke na-eme omume ọma, iwu ahịa (yana ejiji na usoro egwu, iji mee ihe atụ). Dịka ọmụmaatụ anyị nwere ikpe nke Ubuntu (ọ dịghị ihe megidere ya, ka anyị doo anya) ọ na-elekwasị anya na ihu ndị MacOS na iOS nwere mmetụta dị ukwuu. Android nwere "ikuku dịpụrụ adịpụ" nke GNOME Shell. Onwe, GNOME 2 interface dị mma karịa nke ugbu a, mana anyị ga-agbanwe, maka nke ọma ma ọ bụ nke ka njọ. Eji m GNOME Shell na HP MINI 110 netbook nwere 2GB RAM na 320GB DD yana Arch Linux ma ọ dị mma.
Ejirila m KDE na LXDE na m hụrụ ha n'anya, mana uto ahụ na-abanye n'ụdị na ọ bụ ya mere m ji kwenye na abụ m otu n'ime ndị pere mpe.
A ekele obi oma na na odi nma.
Ọ bụrụ na ihe ụtọ ga-emebi site n'ụdị, anyị ga-enwe ajọ oge. Ihe kachasị mma bụ na ihe mebiri bụ ụdị ... ọ bụ ezie na ikekwe nnukwu nnwere onwe ahụ na-emebi anyị n'ụzọ ụfọdụ.
Ezigbo mma, n'ezie…. Ọ dị mma, ihe gbasara uto na ụdị dị na m na-eji Arch, Debian ndị ọzọ ma ọ bụ Ubuntu ma ọ bụ Mint ma ọ bụ Sabayon ma ọ bụ Elementary ma ọ bụ OpenSUSE na Desktop Environment (DE) ma ọ bụ Window Manager (WM) nke kachasị gị mma. akara ngosi, isiokwu, wdg. kedu ihe ọzọ na-amasị gị. Ugbu a, ị na - eme nchọpụta nke m weere dị ezigbo mkpa ma ọ gbasara mmekọ. Echere m na nnukwu nnwere onwe a na-emebiga ihe ókè mgbe ụfọdụ na otu ihe ọ bụla si na-enweghị nchịkwa na-aghọ ịla n'iyi.
+ 100, ha ha. M ga-eche ihe yiri nke ahụ, maka ihe anyị na-eji otu distro na otu ihe nchọgharị ahụ.
daalụ mana ọ bụ naanị uche m XD
Kama nke ahụ, ekele dịrị gị, n'onwe m na-eche na ọtụtụ echiche na ụzọ dị iche iche bụ ihe na-enye anyị ohere ịla azụ ma mụta. Ekwenyere m na ọdịiche ahụ, esemokwu dị iche iche na-enye anyị ohere ịghọta ibe anyị nke ọma na, nke kachasị mkpa, esemokwu ndị a bụ ihe na-eriju anyị afọ ma na-eme ka anyị rụọ ọrụ ka mma ma na-arụ ọrụ.
Kwuru, m na-eji gnome shei na mbipute ya 3.4.x na ụfọdụ ndọtị na n'okpuru Arch Linux isi, nke maka netbook na-akpa oke agwa. Maka ezigbo ndị enyi na ndị ọrụ KDE, ana m akwado ka ị hụ blọgụ Rafael Rojas ka ọ na-edezi ahazi gburugburu ebe a dị oke mma.
Nkọwapụta PC na OS: HP Mini 110 Netbook na 2 GB nke RAM na 320 GB nke Hard Disk, Intel ndịna-emeputa, Ikuku broadcom 4312. Linux Operating System Arch x86 Distribution.
Ọfọn ebe a na-arụ ọrụ enwere m HP Mini 110, yana 1GB nke RAM na 250GB nke Hard Drive na KDE 4.8 na Debian on
Na tiori na o gha aru oru n'enweghi nsogbu ebe obu KDE choro opekata mpe ihe n’erughi 800 MB nke RAM. Maka onye na-akparịta ụka, na-agbakwunye ụgbụ, na-arụ ọrụ ọfịs yana ụfọdụ ihe eserese eserese dị mma, mana ọ bụrụ na ị buru ndị nchịkọta, ntinye foto, nhazi multimedia, sava weebụ, ọdụ data, ngwọta kwụ ọtọ, akụkụ dị ka nyocha na ihe ndị ọzọ, mgbe ahụ ihe malitere ịmalite mgbagwoju anya.
Y’oburu I wuputa ihe di n’elu na I gha eme ya na igwe komputa nke ATOM nke netbook jiri ihu 1024, 600 gosiputara, i gha site na pureblood rue mbe. N'ezie, ọ bụrụ na ịmee mgbanwe ụfọdụ na KDE enwere ike ịhazi ya iji nwee arụmọrụ ka mma.
Enweela m KDE na netbook m na enweghị nsogbu ọ bụla ma enweghị m mkpesa banyere ya, naanị otu ihe dị ka m kwurula, abụrụla m onye ọrụ gnome na eziokwu bụ okwu uto na ikekwe omenala.
Ahụla m KDE ka ọ na-agba ọsọ na 512MB nke RAM na-enweghị nsogbu ọ bụla 🙂
@Adoniz, shei nwere ike inwe ọtụtụ ojiji dabere etu esi eme ya, maka nke a enwere ergonomics nke na-adị ka ọ gaghị abụ ụdị ejiji.
Ngwaọrụ dịka mbadamba, smartphones, wdg, kwesịrị inwe ihe ọ pụtara, mana ọ gbanwere dịka otu agwa kwuru ọtụtụ afọ gara aga, ụlọ ọrụ kọmputa na-achịkwa ejiji karịa ejiji maka ụmụ nwanyị. Ya mere, anyị na-ahụ ụlọ ọrụ ndị a na-emechabeghị dị ka Mkpa na-azọrọ mgbanwe dị ndụ mgbe ọ ga-adị mma dị ka ihe atụ ọzọ, iPad n'otu ụzọ ahụ chọrọ iji dochie desktọọpụ, ekwentị ndị na-amaghị ma ha bụ ekwentị, mbadamba, UFO ma ọ bụ obe nke ihe niile Gnome emere maka mbadamba nkume na-arụ ọrụ ọ bụla, wdg. N'etiti otutu ndi azu na azu, ndi oru ka emebere mincemeat: Anyi bepuru nnwere onwe nke kwesiri idi okike. Anyi aghaghi ichoputa ngwa oru anyi iji nwee ike ijikwa ha dika anyi choro? A na-ahapụ ịhapụ ọrụ ọrụ dị iche iche na-agbanwe ngwa ngwa iji gbanwee ụzọ ọhụrụ ahụ (ihe a bu ihe ohuru na ihe ozo bu nke ikpeazu dika Windows 98) na akpa anyị na-efunahụ maka ịchụso oge a.
N'aka nke m, ruo mgbe m ga-apụ na nnukwu ọgba aghara a na ihe dị oke njọ ma ọ bụ na-agbanwe agbanwe, agaghị m enwe otu ama, ọ bụghị otu mbadamba, ma ọ bụ na agaghị m eji otu Shell.
Lee anya, ị dị mma ebe ọ bụ na ọtụtụ shells enweghị ihe mere ha ga-eji dịrị.
Naanị onye o doro anya na ọ na-agba mbọ ịhapụ akwa mmiri bụ Cinnamon bụ onye tozuru oke nke shells ahụ na nke ahụ ga-achọ ọtụtụ ihe gbasara mkpokoro.
Banyere gnome maka ekwentị ma etinyeghị ya ma ọ bụ rụọ ọrụ na ekwentị ọ bụla, ọ ka na-achị m ọchị.
Anaghị m emegide mgbanwe ahụ, naanị megide mgbanwe nke n'ikpeazụ na-ewute ma ọ bụrụ na enwere shea nwere ike ịhazi ma ọ dịkarịa ala dị ka xfce ma ọ bụ lxde, ụbọchị ahụ, m ga-etinye ya na igwe m yana dịka ị na-ekwu ma ọ bụrụ na m tinye ihe ndị ọzọ, ọ ga-akwụsị ịbụ shei na Ọ ga - abụ gburugburu ka mma, mana gịnị ka anyị mere iji mezuo nke ahụ? Kedu ka ị si kwuo mbanye anataghị ikike agbanyeghị na Linux gbanwere faịlụ ole na ole, anyị rụnyere ihe ndị ọzọ ma ya mere shei ahụ ga - abụ shei maka amara ahụ jiri güindos mmanya mma ga-eme ka XD virus.
Na nkenke, ihe m kwuru bụ na shei dị ka ejiji na etinyere abụghị ihe bara uru.
Agbanyeghi na ekwenyere m na shea kachasị mma bụ cinnamon n'agbanyeghị na anaghị m eji ya oge niile.
shei dị ka ejiji na etinyere abụghị ihe bara uru n'ezie
Havekọwapụtawo na otu ahịrịokwu m chere banyere Shell maka Gnome3 🙂
Mkpo kde bụ maka mbadamba (ma ọ bụrụ na ị pụtara kde nọ n'ọrụ). Mana echere m na ọdịiche dị mkpa n'etiti kde na gnome bụ na mkpesa banyere kde bụ n'ihi enweghị ike karịa enweghị nhọrọ. O yikwara m ka ọ bụ njirimara dara ada ka m gbalịa ịmanye otu ọrụ ahụ na ihe niile, mbadamba, ekwentị na PC.
«Achọpụtara m na ndị ọzọ bụ ụkpụrụ dara ada iji nwaa iweta otu ihe ahụ na ihe niile, mbadamba, ekwe ntị na PC.
Gwa ndi Canonical ka ha hu ma ha gere gi nti ...
N'ezie, n'eziokwu, ha amaliteworị ịrụ ọrụ na ya. N'ebe a na wegupd8.org ha kwuru banyere njikọta n'etiti Ubuntu na Android. Eziokwu bụ na abụghị m onye kwere ekwe na mberede na Cannonical na-agbasochi nzọụkwụ Apple anya ma gbalịa ịtọlite ​​ihe yiri ya nakwa na ọ na-akwụ ụgwọ dị mkpa. Ihe m gbalịrị ịza ajụjụ ma kpughee bụ na enwere ọnọdụ mana ọ bụghị itinye ya n'ọrụ, ya mere, ọ naghị eju m anya na kde ma ọ bụ ndị otu obodo ya na-eme nnwale na BE: Shell (ọbụlagodi nhazi ọzọ).
Ekwusiri m ike, ọ bụ ya mere anyị ji eji OpenSource na distro na DE ma ọ bụ WM nke kachasị jide anyị ma mejuo mkpa anyị.
N'ebe a, ị nwere ike ịbụ onye na-amaghị nke ọma, mana blọọgụ na ọgbakọ m na-ekwu na ọ bụ ebe a na uL (anyị na-eji linux) na ntinye ndị a dị na PC desktọọpụ na laptọọpụ.
Echere m na omume ahụ m kwuru banyere ya na-agbaso ihe atụ nke Apple na nhọrọ ya dị iche iche, PC, laptọọpụ, ekwentị mkpanaaka, iPAD. Ọ bụrụ na ị jirila Mac ma ọ bụ ngwaọrụ ọ bụla, ị ga-achọpụta na ihu ha dị iche iche, nke na-enye gburugburu ebe obibi dị iche iche (dị ka o kwere mee) na ndị ọrụ ya na-amasị. Ọ bụghị n'efu ka ahịa nke ngwaahịa "manzanita" gbawara ma dọta ndị ọrụ PC na gburugburu ha. Nyere na ị ga - enweta ego ma ọ bụ site na ire ahịa ma ọ bụ inye onyinye (n'ihe banyere oghere mepere emepe na FSF) ọ bụ ihe nghọta na ezi uche sitere na echiche "azụmaahịa" na "ọhụụ" nke ọtụtụ na-anwa iso ndị isi ihe na-enye ihe yiri ya ma na inweta onu ahia.
Otu uru anyị nwere na ụwa a nke sọftụwia na - akwụghị ụgwọ bụ nke ahụ, na anyị nwere ike ịhọrọ ma mee mkpebi anyị na - ejighi iji ihe amanye (ụdị Microsoft). M na-eji gnome shell maka 2 dị mfe ihe:
1.- Enwere m mmasị na gburugburu ebe obibi (abụ m otu onye ọzọ nke pere mpe na-akwado shea) yana ahụrụ m ya nke ukwuu na maka ọrụ m (dịka onye ndụmọdụ IT) ọ dị mmiri mmiri ma baa uru dị ka ọ dị na gnome2.
2.-Abụ m onye ndụmọdụ na ọ dị nwute na ị ga-agbanwe ọtụtụ ihe ebe ọ bụ na ọtụtụ n'ime ndị ahịa bụ ndị ọrụ aka (ịghọta Microsoft na Apple) yana yabụ mgbe ị na-anwa ịnye ha ebe ọzọ, nke a ga-adị ka iwu (na site na ahụmịhe) iguzogide mgbanwe bụ ihe na-eweta ọdịda na-anwa imejuputa nyiwe ndị ọzọ site na 90%.
Ka anyị hụ, ka m mee ka ihe doo anya n'ihi na echere m na ọ dị mkpa .. Na ọdịdị dị mma, ya bụ, ụfọdụ isiokwu mara mma ọzọ, Gnome Shell nwere ike ịdị mma, mana ee, ọ bụrụhaala na ị nwere PC nwere ezigbo akụ ...
GNOME / Shell dị arọ n'ezie? Ọ dị mma na ọ chọrọ ntakịrị ihe maka mmezi eserese, mana ịchekwa isi okwu ahụ - ma ka anyị chee ya ihu, igwe ndị a _all_ igwe na-eji ezigbo GPU abịa - Echere m na GNOME / Shell mara mma na ojiji nke usoro.
Ọ bụ ihe ziri ezi Martín, eziokwu bụ na naanị ihe m mere ahazi na shei bụ isiokwu na akara ngosi, ma ọ bụghị na ndabara ma ọ na-arụ ọrụ nke ọma, yana dịka m kwuru na m na-agba ya na net mini 110 net
"Taa igwe _all_ biara na ezigbo GPU ..."
Na ndị anyị bụ ndị na-enweghị igwe "ọgbara ọhụụ" mana ọ bụ otu si afọ ole na ole gara aga? Anyị enweghị ọtụtụ ihe ọchị ikwu ...
Ọ dị mma, enwere m ya na HP Mini 110 Netbook na 2 GB nke RAM na 320 GB draịvụ ike, Broadcom Wireless 4312, Intel graphics.
The distro m na-eji bụ ArchLinux na ọ na-arụ ọrụ ebube.
Kpọmkwem. Nsogbu nke KDE ọ bụ nkwụsi ike na ọrụ ya.
Nke ahụ bụ eziokwu, mana enwekwara ọtụtụ nghọtahie dị n'etiti ndakọrịta nke ụfọdụ ngwa sitere na 3.5.x ka 4.x usoro, dịka ọmụmaatụ KDevelop, KOffice na mwekota nke Firefox na QT (naanị ịkpọtụ ole na ole).
Gnome Shell mgbe ọ pụtara na nsụgharị nke mbụ ya na-ejikwa njehie, yabụ nhazi ahụ bụ nke kacha nta n'ime ya, na mgbakwunye na eziokwu ahụ ngwa ndị nwere GTK3 bụ ihe atụ na ndakọrịta na GTK2; ọ dabara na nke a ka edozila ma dozie ya na ntụgharị nke nyocha ọhụụ nke usoro 3.x.
Agbanyeghị, anyị ga-ahụ ihe ga - eme na ndegharị 6 nke shei ahụ, nke na - ekwe nkwa mmewanye gburugburu ebe obibi, ụfọdụ atụmatụ na uru ọhụụ.
Na-azaghachi ihe niile ekwuru na eri a na GNOME nwere nsogbu arụmọrụ, ahụhụ na enweghị nhazi.
Amaghị m ma ọ bụrụ na ebe nchekwa na-aga n'ihu m, mana echere m na m na-echeta na otu GNOME nwere ụda ya, ya bụ, ha adịghị eme ọsọ ọsọ na ha ga-ewepụta ihe mgbe ha dị njikere, ọ bụ ndị mmadụ nọ na ọsọ iji nweta ha. na ihe, maka mkpasu iwe nke inwe "ihe eji egwuri egwu ohuru mara mma," wdg. N'ime otu a bụ Canonical na site na ịdabere na GNOME na ịchọrọ GNOME iji nye "akwụkwọ akụkọ eserese ya" iji "nọrọ ugbu a na mgbasa ozi kọmputa", ọ na-agbasi mbọ ike, mgbe ahụ ọ kwụsịrị site n'iwepụ shea ya dabere na GNOME na nke ahụ bụ mgbe GNOME "nwere" ịmalite ịhapụ ihe maka onwe ha.
Echere m na ọ bụrụ na a hapụ ha ka ha nwee ike, ha gaara ewepụta oge iji wepụta ihe ka mma, zuru oke ma sie ike, tupu ha ebupụta GNOME3 ọhụrụ.
M mgbe a minter, ma Cinnamon merie m.
Know mara, anaghị m eji ụbọ akwara ndị a (ma matte na pawuda). Aga m eme ihe nrụnye na interface a. Site na ihe m gụrụ ma hụ na nnọkọ na blọọgụ dị iche iche, ọ bụ ezigbo ntinye nke gnome2 nke m hụrụ n'anya. Aga m egosi ya.
Ee ee, ọ bụ otu n'ime Shell kachasị mma nke dị ugbu a maka Gnome, ọ ga-aga n'ihu na-aka mma.
Na-ekwenye na gị.
M ji Debian wee were obi uto lee Cinnamon anya. Ma na nke gị, m ga-eche mbipute 1.6 iji nyochaa ya nke ọma, ma ọ bụ naanị ma ọ bụrụ na mmadụ maara ihe ọ na-eme iji chịkọta mbipute na mmepe nke bụ 1.5.X.
Esi m na Linux were ọtụtụ afọ, abịara m jiri igbe mepere emepe, gnome 2 ...
N’oge gara aga, m gbalịrị ịdị n’otu (ubuntu), cinnamon, mate, Kde, xfce, lxde, gnome shell ..
Eziokwu bụ na naanị ihe na-amasị m na usoro nke aesthetics na ọrụ bụ gnome shei ... achọpụtara m na ọ dị mma iji, ọ dị mma, na-enweghị njehie, anaghị m ahụ megide ya. Ma dika m kwuru na m gbalịrị niile ...
Na akwara gnome ahụghị m mkpa ọ dị ịgagharị na-echegharị ihe ọ bụla na ọdịdị ...
MA ee, etinye m ihe dịka 10 ndọtị ... dịka ọmụmaatụ, nke mere na akara ngosi dị na ogwe osisi dị njọ dị n'elu, dị ka nke pidgin ma ọ bụ skype, ihu igwe, taabụ ọzọ na ihe ole na ole.
Nke ahụ bụ kpọmkwem ihe m na-ekwu, shei gị abụghịzị shei.
Mmetụta dị mma karịa kde ma wepu mmetụta ị ga - ahụ na na 512 ebule ọ na - efe.
Enwere m 8gb nke ebule, achọghị m ị nweta mmetụta 🙂
KDE Achọghị m ịmasị mma, ọrụ, bọtịnụ mmalite, ogwe, wdg wdg ... Gnome maka ugbu a ọ masịrị m, na ndọtị m 100% afọ ojuju
Ọ bụrụ na ị maara na ị nwere ike ịgbanwe ọdịdị ị nwere ike tinye ya na otu ọdịdị ahụ dị ka shei gnome, bọtịnụ mmalite na-achọ ihe mara mma na ịntanetị ma ị gbanwee ya.
Mana enwere gị, ndị ahụ bụ ihe masịrị gị, anaghị m ekwu na ị mehiere, naanị na gnome-shell ahụghị m n'anya. XD
haha dịkwa mma, ma ọ bụrụ na m ga-aga ịchọ gburugburu na nke ahụ bụ ihe ọzọ ...
gnome shell IHE UGBU A, ka m nwere ya ọ na-ejere m ozi
Dị ka gị, ejirila m linux mee ihe ọtụtụ afọ ugbu a ma ọ gafeela ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ DE ma ọ bụ WM niile dịka KDE, xfce, lxde, openbox, fluxbox, iceWM, wdg. na distros dị iche iche dịka Ubuntu, kubuntu, opensuse, suse, sabayon, archbang, crunchbang, pclinuxos, mint, pc-bsd, ghost bsd, mandriva, mageia, fedora, hat hat, turbo Linux, alinux, debian, mephis, antix, wdg. . na dịka iwu ọ na-alaghachi mgbe niile na gnome (2 wee 3) na Archlinux dị ka isi.
Enwekwara m ọtụtụ ndọtị iji nye ya mmetụ onwe m na nke ahụ dabara na mkpa m maka ezumike na ịrụ ọrụ na enweghị m mkpesa.
Ọ dị mma, maka ihe ụtọ agba, nke mkpokoro m na m nwara, nke kacha masị m bụ pantheon (echere m na ọ bụ nke kachasị enwere ike ịhazi, mana achọtara m ya nke ọma) nke kachasị amasị m bụ ịdị n'otu (ọ dị ezigbo mma arọ na mgbe m chọrọ ịchọ ihe na-akụtu ihe niile ga-egosi ma e wezụga ihe m na-achọ) Gnome shei anaghị amasị m, ma m ga-agbakwunye ọtụtụ ndọtị na-ahapụ ya ka m chọọ (na mmepe nke ndọtị na ndị okike nke gburugburu na-enweghị obi ụtọ n'ihi na ndị a na-agbaji mmelite ọ bụla, ọkara aka ekpe.nke kacha mma gnome shel isiokwu okike kwụsịrị ịme isiokwu maka nke a) Cinnamon Agbalịrị m ya, eziokwu bụ na anaghị m amasị ya ma ọ bụ na-enweghị mmasị na ya, enwere m mmasị.
Oh Pantheon, echefuru m .. Nnukwu ọrụ sitere na ụmụ okorobịa.
N'eziokwu, Elementary OS bụ distro nke m na-achọ ịnwale. Obere ihe ndi otu a jiri buru ihe ojoo bu ihe omuma banyere m. Ngwa ndị dị ka njikwa email, ihe nchọgharị faịlụ, ihe nchọgharị na ihe ndị ọzọ dị ezigbo mma. Agbanyeghi na m di iche n`uzo ufodu, echere m na o bu ihe ozo di nma nye onye choro inwe gnome ma enweghi otutu "steroid" Echere m na dịka m ga-eme Mate na Cinnamon, m ga-eme ntinye nke distro a (dabere na Ubuntu, n'agbanyeghị) n'ihi na kemgbe ọ pụtara, emeela m onye na-enye anya ma nwee mmetụta na ọkwa dị ka nke enyere Nke KDE.
M ga-ahụ Arch na ElementaryOS, ROCKS n'anya!
Ma gịnị mere ị ga-eji ụzọ Chakra were Arch? EOS nwere onwe ya na Ubuntu.
Enwere distros nke na-eti egbe n'onwe ha, dị ka Mint ma ọ bụ Fuduntu, n'ihi na ha ka na-achọ iso Ubuntu na Fedora, n'otu n'otu, (Abụ m ubuntero, mana ọbụghị ubunctista), akwụsịrị m iji Mint, n'etiti ihe ndị ọzọ, n'ihi na ha họọrọ ịhapụ. nkwụsi ike nke ha nwere na gnome2 ka e jikọtara ya na mkpo gnome ọhụrụ ahụ Ubuntu tinyere.
na pc m ọ bụ ụzọ ọzọ gburugburu, na KDE4.9.1 Enwere m akonadi + mysql na nepomuk ahazi ma ọ ka na-eche ọtụtụ mmiri karịa gnome shell.
O doro anya, ọ bụrụ na ịme mgbanwe ụfọdụ n'ime atụmatụ nke KDE ị nwere ike ịnwe oke mmiri na gburugburu ebe obibi. N'ezie na ụdị 4.9.x nke usoro ụmụ okorobịa na KDE etinyela mgbalị dị ukwuu na njikwa mma na ndakọrịta ọbụna na ngwa ndị sitere na GTK.
Rafael Rojas na-eme ihe ntinye KDE na ArchLinux na Dell netbook na nsonaazụ ya dị ukwuu ma bụrụ nke na-enweghị ntụpọ na-enweghị atụ anya ka ihe ọ bụla gnome na shei.
Ọzọ, KDE bụ otu n'ime gburugburu kachasị mma n'ebe ahụ taa, ọ bụ ezie na BE: Shell ka na-etobeghị, echiche a bụ otu ihe ahụ dịka gnome. Dịka m kwuru, "omume" na - egosi njikọ dị ukwuu n'etiti eserese eserese nke ngwaọrụ mkpanaka na nke PC (ụdị Apple), ma ọ bụrụ na ịchọghị ihe ndetu nke onye isi oche nke Cannonical (nke ahụ bụ Ubuntu), n'agbanyeghị na a na-akatọ ya na na-enyo enyo (site na ụfọdụ na ndị ọzọ) na-atụ na ntụziaka ahụ; anyị ga-ahụ n’oge ma ọ dị otu a ma ọ bụ na ọ bụghị.
Mana dịka m kwuworo, nnukwu uru nke anyị n'ime ụwa OpenSource nwere bụ na anyị nwere ike ịhọrọ ma nwee njikwa nke gburugburu anyị, yana iji DE ma ọ bụ WM nke kachasị masịrị anyị masịrị anyị na mkpa anyị. .
Site n'ụzọ m ga-anwale shea Kde mgbe ọ tozuru oke ma eleghị anya m ga-agbanwe obi m banyere shells.
Anọ m na-eji gnome shell na mageia 2, ma eziokwu ahụ dị mma, ọ bụ naanị ihe gbasara iji ya, nsogbu bụ na ha gbanwere ihe niile, ndị mmadụ kpọkwara mgbanwe asị.
GNOME Shell nwere ọdịnihu, ọbụlagodi n'oge ọkara. Ọ bụ ebe pụrụ iche nke ụfọdụ mmadụ nwere mmasị na ya. Nlanarị ọ ga-abụ ihe ịga nke ọma nye ndị mepụtara ya? Nwee olile anya.
Aghọtaghị m na ụfọdụ tụlere mgbanwe KDE 3.5-4.0 na mgbanwe GNOME 2-3. Achọrọ m icheta na GNOME 2 bụ desktọọpụ kacha mkpa ma jiri rụọ ọrụ nke GNU / Linux. Ndị mmepe GNOME wetara ọrụ ahụ na nkwụsị site na ịmalite GNOME Shell, ndị ọzọ si mba ọzọ dabere na GNOME 3 na GNOME 2 (MATE) pụtara. GNOME Shell nwere ndị ọrụ ole na ole (ma e jiri ya tụnyere GNOME 2). GNOME enwekwaghị ike ya.
Na KDE nke ikpeazụ nke 3.5 dabara na oge na nke mbụ 4.x. Mgbe ha hapụrụ KDE 3, oge agafeela iji kwado ọnọdụ ọhụrụ (nsogbu bụ na ọ dị ezigbo akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ). Ndụdụ adịghị okooko ebe niile. Edere dropouts mana ka oge na-aga ndị ọrụ natara.
Onwe m, m na-ahọrọ GNOME na KDE ịgbaso ụzọ dị ugbu a. Echere m na ọ kachasị mma maka mmadụ niile.
Dị ka ejiji nwere ike ịbụ mana m na-ahụ mkpịsị gnome na laptọọpụ ma ọ bụ karịa n'ebe ahụ na desktọọpụ pc.
Gnome-shell dị ukwuu maka ekwentị (Ọ naghị arụ ọrụ na nke ọ bụla n'ime ha), mbadamba na Ipad mana ọ nweghị ihe ọzọ.
Onweghi ihe ị ga - ahụ, GNOME Shell bụ nke pụrụ iche, nke bara uru ma baa uru, na ee, ị ga - ahazi ya nke ukwuu - nke na - ekwu okwu ọma banyere shea ka ọ na - egosi mgbanwe ya.
N'ime GNOME Shell m hụrụ ruo ugbu a, nke kachasị mma bụ Mint 12, wepụ ogwe osisi dị n'okpuru ma bugharịa apụl na nke mbụ ma hazie mkpụrụ akwụkwọ yana yana ndọtị ụfọdụ arụnyere n'ezie.
Naanị ihe ị tinyere dị ka uru "wepụ ogwe osisi dị n'okpuru ma bugharịa apụl ahụ n'elu ma na-ahazi mkpụrụ akwụkwọ yana ụfọdụ ndọtị arụnyere bụ ihe ịtụnanya n'ezie" A na m ewere ya ọghọm.
Ihe dị iche na Echiche m chere, mana dịka m kwurula isi mmalite na ndọtị nke kwesịrị ịmalite, KDE nwere ha, nwunye ọ nwere ha, Cinnamon ịbụ shei tozuru etozu nwere ha na Xfce na ọbụnadị lxde nwere ha.
Ma dị ka m na-ekwu na ha bụ ndịrịta iche nke echiche ọ bụla ọzọ.
ekele na jisie ike na shells ị ga - achọ: p 😀
@ Martin, ihe ị nwara bụ Mgbakwunye Mint Gnome Shell (MGSE) nke ahụ bụ ezigbo nzọpụta n'oge ahụ na iji dochie ya bụ na a mụrụ Cinnamon. You na-achọpụta mgbe ahụ ọrụ niile achọrọ na Gnome Shell iji nwee desktọọpụ dị mma? Ma n'agbanyeghị nke ahụ, ọtụtụ ihe ka na-efu efu. Agaghị m aga nsogbu nke ịme MGSE nke m oge ọ bụla m wụnye Shell Gnome, ọbụlagodi na ọ ga-ada n’elu.
Gnome Shell dị mma iji ya na keyboard na òké, ọ dịkwa ọkụ (ihe na-erughị 300MB) karịa KDE (ọbụlagodi na enweghị ọrụ nemopunk na ihe), ọ nwetara na nkwụsi ike mana ọ bụghị ka o nwere na gnome 2 na Ọ na-agba ọsọ na PC dị mfe (2 × 1.65 GHz na 1,7 nke Ram abụghị ihe ọ bụla iji dee n'ụlọ) ma ugbu a na OpenSuse na 3D osooso adịghị achọrọ
Ejirila m GNOME Shell ma ọ dị njọ karịa Plasma na kọmputa m (ọbụlagodi netbook m). Mana ịrụ ọrụ ka mma agaghị eme ka ịchọrọ iji ya. Ọ bụ ụzọ dị egwu nke na ọ na-enye m hives (ịwụnye mgbakwunye maka arụmọrụ na-adị m ka nzuzu). Agbanyeghị, aghotara m na enwere ndị ji ịnụ ọkụ n'obi nabata "tebụl" ọhụrụ ahụ (ihe gbasara uto na ihe ndị ka mkpa).
Abụ m onye ọrụ Gnome-Shell nwere afọ ojuju ma echere m na karịa ma m nwere ike ịmasị gburugburu ebe obibi ma ọ bụ na ọ bụghị, ihe dị mkpa bụ "mmetụta Gnome 3". Ọdịdị nke nsụgharị Gnome ọhụrụ mepụtara nsonaazụ abụọ, n'otu aka ịgbasawanye: gburugburu eserese ọhụụ, site na Unity na Cinnamon nke mejupụtara gburugburu ebe obibi (ụfọdụ ga-asị na ọ bụ nkewa ma ha ga-akwa ụta ya), ya bụ, ohere ndị ọzọ ịhọrọ ihe na-amasị gị (na ndị ọzọ flamewars too). N'aka nke ọzọ, ọ gbanyere mgbatị na gburugburu ebe ndị ọzọ dịka XFCE, LXDE na KDE (ọ bụ ezie na ejighị m n'aka nke a, enweghị m ọnụọgụ ojiji). Ọ bụ ya mere m ji chee na ngosi nke Gnome 3 dị mma, maka ndị na-amasị ya na ndị na-adịghị, ọ bụ ezie na ụfọdụ ọnwụ hapụrụ n'ụzọ :). Ekele si Argentina.
Enwere m ekele ịdị adị nke Unity na Cinnamon dị ka nsonaazụ nke Gnome Shell, yabụ anyị niile nwere ihe masịrị anyị. Naanị ihe m na-enweghị ekele maka bụ ụzọ ọjọọ iji gbanwee na ịdị n'otu na Ubuntu n'oge ahụ.
@RudaMacho: lee igwe ugbo ala i nwere !! 😉
Banyere interface (GNOME Shell) na njikọta weebụ nke desktọọpụ, ekwenyere m gị nke ọma ọ bụ ezie na m ga-etinyerịrị na tebụl isiokwu Nautilus nke chetara m nke ọzọ ebe a mgbe m gbachitere ọrụ na GNOME 3, anaghị m eso ụzọ. nke GNOME na eziokwu bụ na amaghị m ebe ha na-eduga Nautilus, mana ihe doro anya bụ na ha enweghị mgbaghara maka ịgbanye na ime ya dịka ha mere na nke ikpeazụ (3.6), ya mere Nemo, faịlụ na onye maara otu ma ọ bụ ọzọ ndụdụ ...
Mmetụta GNOME 3 adịghị mma. Kedu ihe ị ga-esi mee ka iberibe mpempe akwụkwọ dị iche iche. Ọ bụrụ na GNU / Linux bụ usoro okike, mgbe ahụ GNOME Shell, Cinnamon, MATE, Unity, ... na-asọrịta mpi na ibe ha n'otu ụzọ obibi obibi, imebi ihe onwunwe na ịbanye n'ụzọ. Ebe obibi na-akpata nkewa na-akpata ọnwụ nke iche iche na ogologo oge. Enweghi ndị mmepe zuru oke ma enweghị ndị ọrụ zuru oke maka nnukwu ọrụ. Mpekere ahụ ga-ebelata ọganihu nke desktọọpụ GNOME niile. Ka ha anaghị arụkọ ọrụ ọnụ na ihe ọ bụla ga-abụ ihe jọrọ njọ.
Ọ bụrụ na enweghi ndị mmepe mgbe ahụ kedu ka mkpokoro dị iche iche si arụ ọrụ nke ọma, nke a ka m na-ekwu na ọrụ ndị ahụ na-aga n'ihu na nkwụsi ike na arụmọrụ. Ọ bụrụ na enweghị ndị ọrụ zuru oke, mgbe ahụ, ụfọdụ ndị agaghị eji onye ọ bụla mee ihe, yabụ onye ọ bụla nwere opekata mpe otu onye ọrụ nwere obi ụtọ :), ọbụlagodi DWM;). Ngwurugwu dị iche iche nwere otu isi, Gnome 3 na ebe ha nwere ike ịmekọrịta, na isi nke na-akwado ha. Paraphrasing RMS "Enweghị ebe desktọọpụ ọzọ ma Gnome 3 na Gnome-shell bụ otu n'ime Shells";).
On di iche-iche-fragmentation bụ otu n'ime ihe ndị na-esi nke nnwere onwe, Ọ dị m nwute obere aka ike :) Ekele, ezigbo ọma.
Na ha na-arụ ọrụ nke ọma bụ echiche gị (kwesịrị nsọpụrụ). Ihe ị na - enweghị ike ịma bụ otu GNOME 3 ga - esi nwee ọganihu site na iji otu eserese eserese. GNOME 2 mere nke ọma, GNOME 3 anyị ga-ahụ. Edere m ebe ọ bụla na ha enweghị ike ịmekọrịta, ihe na-echegbu m bụ na anaghị m ahụ ebumnuche siri ike ịmekọrịta. Ihe omuma atu doro anya bu Nautilus. Nautilus na-abanye na ngwa GNOME Shell naanị. A ga-amanye ndị ọzọ nke "shells" ka ha mefuo ihe onwunwe iji meghachite wiil ahụ n'ihi na ha enwebeghị ha.
Di iche iche adighi ka nkewa na nkewa abughi nnwere onwe, adi m nwute obere demagogue ;-). Ọ dị mma, n'ezie.
Amaghị m ma ọ bụrụ na ị maara na dwm nwere ọtụtụ puku ndị ọrụ, mụ onwe m na-eji ya 90% nke oge m nọ n'okporo ụzọ iji chekwaa batrị na ọ bụ oke, ọ nwere ike ịhazi ya mana ọ dị mfe karịa ihe atụ Awesom3 nke dịkwa mma nke ukwuu ma n'iji ya tụnyere ya, ọ bụ leviathan.
Ọfọn, ma eleghị anya, enwere m ntakịrị mwute (ma ị gafeelarị), mana mgbe m gụsịrị ọtụtụ ebe a enwere m naanị otu obi abụọ. Gini bu “Shell”? Kedu ihe dị iche na gburugburu desktọọpụ na shei? Kedu ihe ị ga-ekwu na "Unitydị n'Otu", "Gnome Shell", "Be :: Shell", "Pantheon" bụ ma ọ bụ na ọ bụghị shei ...?
Naanị ihe m nwere ike iche bụ na iji “Enlightenment” na mbido oge izizi gị na-enye gị nhọrọ ịhọrọ ụdị desktọọpụ ahụ, na-enye ọtụtụ ihe atọrọ atọ: “Desktọpụ”, “netbook” na ndị ọzọ. Echere m na ọ bụrụ na Gnome nyere nhọrọ n'etiti ụfọdụ nhọrọ na onye ọrụ ahọrọ "ihe ọ bụla hel ọ chọrọ ime" ọ ga - enyere aka ma merie ọtụtụ ndị ọrụ.
Nsogbu m na-ahụ na Gnome Shell bụ na iji hazie gburugburu gị, anyị ga-abanye n'ọtụtụ ndọtị na nhọrọ m chere na ọ ga-abụrịrị na ndabara.
Kpọmkwem n'ikpeazụ otu onye ghọtara m.
Know mara, ị metụrụ isi ihe m na-atụleghị na ọ bụ nkọwa nke shei, ihe m ga-eme ụbọchị ole na ole. Banyere nhazi ị ziri ezi, ọ ga-adaba adaba na m ga-achọ ịhụ ya (KDE nwere nhọrọ Desktọpụ na usoro Netbook ọdịnala). Dabere na usoro oge gnome, njikọta na ndọtị a ga-akwado ya na ndabara ruo usoro 8 (3.8.x), yabụ anyị ga-echere ntakịrị.
Chegodi nke mbe, akụkụ nke shei ya ga-abụ Shell, nke na-arụ ọrụ na oyi akwa kachasị elu mana agbanyeghị na-enye ya ikike pụrụ iche nwere ohere nke anụ nkịtị anaghị enye ma kọwaa ya site na ịkọwapụta mmepe nke anụmanụ niile. N'ebe ndị ọzọ, ọ nwere anụ nkịtị nke na-eji ya nwayọ.
Kedu ihe ga - eme mgbe anụ ahụ gbanwere n'ụdị dị na ya? Otu ihe ahụ na-eme Nautilus, mana o zuru ezu ịnweta ọzọ ịmegharị ya…. nweekwa ndidi.
«Ọfọn, ma eleghị anya, ọ na-eme m obere nwute (ma ọ dịla akaha), mana mgbe m gụsịrị ọtụtụ ebe a enwere m naanị otu obi abụọ. Gini bu “Shell”? Kedu ihe dị iche na gburugburu desktọọpụ na shei? Kedu ihe ị ga-ekwu na "Unitydị n'Otu", "Gnome Shell", "Be :: Shell", "Pantheon" bụ ma ọ bụ na ọ bụghị shei ...? »
* ụkwara * http://lmgtfy.com/?q=que+es+un+shell+en+linux
jvx jọrọ njọ?
nke a bụ ụgha
ọ bụrụ n’ezie ọ dị ka GNOME 2 a hụrụ n’anya
ma ọ bụ karịa customizable na fechaa
Eziokwu bu okwu okwu na ndabara (n'èzí ezi na ulo buntu) mara nma. Dịka ọmụmaatụ ma ọ bụrụ na iji OpenSUSE ma ọ bụ Archlinux okwu ahụ dị oke egwu. Ihe dị ịtụnanya gbasara desktọpụ desktọọpụ a bụ na ọkwa nke nhazi ahaziri oke. Fewbọchị ole na ole gara aga, m nwalere ụdị ọhụrụ nke oghere na manjaro ma hazie ya n'ụzọ nke na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ KDE ma ọ mara mma.
Ekwusi m ike, site na ndabara isiokwu a bụ ihe jọgburu onwe ya mana ịhazi ya na mgbanwe mgbanwe.
Eziokwu na ime ihe n'eziokwu, isiokwu ndabara bụ ihe jọgburu onwe ya, n'agbanyeghị ụdị distro anyị na-ekwu maka ya (belụsọ ndị sitere na * buntu ezinụlọ na-abịaworị na tweaks na mgbanwe na isiokwu ndabara site na ihe m na-agwa gị). N'ezie, omume ọma nke XFCE nwere bụ na ọkwa ya nke ọdịdị na ọdịdị, ebe ọ bụ na site n'echiche m ọ bụ otu n'ime ihe zuru oke ma na-eme ka ihe jọgburu onwe ya. GNOME2 abụghị ihe jọgburu onwe ya na isiokwu ya.
ihe m kwuru n’oge gara aga n’okpuru XFCE n’isiokwu mbu ya ma ọ bụrụ na ọ jọrọ njọ mana isiokwu Xubuntu maka XFCE ma ọ bụrụ na ọ mara ezigbo mma yana ka ọ na-arụ ọrụ ọ karịrị akarị ikwu, ọ dị ezigbo mma XFCE.
Zaghachi na ferchometal
Kedu ihe a na-akpọ windo isiokwu?
Na laptọọpụ m hụrụ gnome-shell n'anya, m dị ka otu ọnwa na xcfe mana eziokwu bụ na m na-anọ na gnome mgbe niile. : B
PS: Gini bu isiokwu gtk nke inwere na foto nke nautilus bu chi so ya? 😀
M na-eji Xubuntu 12.04 na kọmpụta m dị ka otu sistemụ ka m gwa gị, XFCE na ọdịdị ya dị njọ mana xubuntu na-eme ka ọdịdị ya dị ụtọ, XFCE meriri m na mgbakwunye na ịdị oke ọsọ, dị irè, arụ ọrụ na tinyere ihe niile gunyere, ọ bụ ezigbo desktọọpụ, m na-eji ya ọnwa abụọ n'ihi na tupu m anọ na fedora na shei gnome ka m gwa gị na fedora dị mma ma dịkwa mma na m na-achọ ịnye shei ohere ma eziokwu bụ na XFCE meriri m Eleghi anya ọ ga-abụ n'ihi ezigbo ncheta nke gnome 2 nke XFCE na-ewetara m, oh na m na-atụgharị uche nke OpenSUSE 2 na XFCE na eziokwu ahụ dị ezigbo mma, akwadoro maka openSUSEROS! Cheers!
Site n'ụzọ, amaghị m ihe kpatara na ibe ọ na-amata m, ọ dị ka Ubuntu kama Xubuntu.Echere m na ọ matalarị distro na onwe ya.
N'ihi na ọ bụ Ubuntu, na gburugburu XFCE ahaziri ma mezie ya, ọ B NOTGH dist distro na-adịghị mma.
Ọ dị m ka ọ bụ na ebe ahụ na-ekwu, enwere nkọwa banyere ịme nduzi na shea ọzọ (ma ọ bụ na ọ bụ na isiokwu nke ọzọ), mana ebe ọ bụ na okwu a dị ntakịrị, anaghị m echeta kpọmkwem ebe. Dị nnọọ ka ị na-arịọ gị ka ihe ọ bụla funahụ gị, ana m ahapụ otu echiche iji hụ ihe ị chere.
Amaghị m ma ọ bụrụ na onye ọ bụla emeela ihe a, mana echere m na ọ ga-abụ bọmbụ iji mee ezigbo nduzi iji wụnye GNOME3 na Shell ya dị iche iche na ma eleghị anya enwere ike iji MATE rụọ ọrụ nke ọma, n'ezie echiche a bụ inwe ike itinye ha ma nwalee ha niile na n'otu oge ahụ, dị ka nke ha na KDE otu ụbọchị banye na nke ọzọ na LXDE, wdg, ebe ọ bụ na esemokwu dị n'etiti ha, ndị mmadụ nwere ike iji ihe dị iche iche na nke onwe ha iji nweta nkwubi okwu ha ma eleghị anya ọbụna gbuo ọtụtụ ajọ mbunobi n'otu mgbe na mgbe niile. Better karịa karịa m maara nke bụ ezigbo disros maka ụdị ọrụ a, nke na-ahụkwa ọtụtụ ndị na-ege ntị na blog echere m na ọ kwesịrị ịdị n'etiti Arch na Debian Testing, Sid?
Maka ịbụ ihe Echere m na emebeghị ya ma ọ bụ na ọ dịghị ihe ọzọ na-aba ụba n'ebe ahụ, ọ ga-abụ ihe dị egwu maka blog; Ọzọkwa, m ga-enwe obi ụtọ na onye ndu dị otú a ebe ọ bụ na agha a nke shells maka oge mbụ n'ime ọtụtụ afọ, versionitis na-ata m ahụhụ site na ịnwale sọftụwia ọhụrụ yana eziokwu bụ na enwere m mmetụta dịka ọhụụ ọhụrụ, dị ka onye bi n'ime obodo furu efu na obodo, Amaghị m ebe ma ọ bụ otu esi amalite (ọkachasị mgbe m si na "super old" Lenny, nke ga - amanye m ịgbanwe distro).
N'ikpeazụ, echere m na na ụdị Shell a, GNOME3 (na GNOME n'ozuzu ya) siri ike, ihe ọjọọ bụ na onye ọ bụla n'oge ọ na-akwalite onwe ya niile na-atụba n'akụkụ ha ma gọnahụ GNOME dị ka a ga - asị na ha bụ ihe onwe ha ma doo anya maka ree onwe ha dị ka ndị kachasị mma ma zụta ha n'aka ha, cheta iru eru na GNOME3. Ọ ga-adị obi umeala ma baara onye ọ bụla uru ma ọ bụrụ na e rere ha dị ka mgbakwunye ọhụrụ na nhọrọ maka GNOME, mana ụwa kachasị mma adịghị adị na ọbụlagodi na ụwa Linux ebe ọtụtụ ịchọ ọdịmma onwe onye nanị jupụtara.
O doro anya na okwu banyere aha ọjọọ bụ ihe na-agbadata na ihe niile ... KDE adịkwaghị arọ dị ka ọ dị na mmalite nke ngalaba 4.x, ịkwesighi igwe iji na-agba ya nke ọma, n'eziokwu GNOME- Shell nwere ihe ngwaike chọrọ karịa KDE.
Ma ọ bụghị eziokwu na mmemme KDE niile nwere K tupu aha ha (dịka Choqok, Akregator, Amarok, ShowFoto ...).
Eji m obi m niile kwere na Gnome Shell gburu Unity, ọtụtụ ndị mmadụ aghọtaghị ihe dị iche na ha abụọ, ọ bụ eziokwu na Gnome Shell pere mpe "enwere ike ịhazi ya", mana mgbe ị jidere Gnome Tweak Tools na ndọtị ya ọ bụrụ ihe ọzọ. Ọtụtụ na-eme mkpesa na ọ na-eweta naanị otu bọtịnụ, ọ bụ ihe na ugbu a enwetala m ya, ọ bụ ihe a na-enweghị atụ, yana bọtịnụ ziri ezi m na-ebelata, pịa ugboro abụọ m na-eme ka ọ dị elu, nnukwu igodo, m na-ahụ windo m nwere n'ọrụ, oge ọzọ m gụrụ ya Otu onye mere mkpesa n'ihi na ha enweghị ọdịiche dị n'etiti ngwa 8, n'ihi na enwere ike ịhazi ha na desktọọpụ, echeghị m na onye ọ bụla na-eji windo 8 na otu desktọọpụ, agara m na ndọtị ozi ahụ, mana Gnome-Shell nwere ọdịnihu, m ga-anọgide na-eji ya mgbe m nye akụrụngwa
Ma nke ọma, nkọwa m.
Ọ bụrụ na m tụlee na Gnome ahụ, ma na shei, na (ekele maka Ubuntu nke mere ka o si n'ọnwụ bilie) ụdị "nkịtị" ma ọ bụ "Omuma" nwere ọdịnihu, ndị ahụ bịara ọhụụ agaghị agba mgba na shea, mana ndị anyị jirila ya mara ọtụtụ afọ na Gnome nkịtị na n'agbanyeghị agbanyeghị etu anyị si anwa XFCE ma ọ bụ shea anyị anaghị agwụcha njikọta, anyị ga-enwe obi ụtọ na ịga n'ihu gburugburu ebe obibi.
Ọ ga-amasị m ka Debian were ụdị a nke kachasị Ubuntu maka Wheezy kama ị na-eme nzuzu banyere ịtọ XFCE dị ka isi DE !!
Xfce ọ dị iche na GNOME 2? Ekwenyere m mgbe niile na ndị gnomers ga-achọpụta na ọ bụ ihe na-enweghị isi iji otu ma ọ bụ nke ọzọ - na-echekwa atụmatụ ndị dị elu nke GNOME nwere.
Dị ka KDE si na desktọọpụ Windows.
Ha nwere ụdị ọrụ yiri nke a, mana enwere ndị nwere ike ịgbakwunye, dị ka onye njikwa netwọkụ na xfce (ma ọ bụ wicd), nkwụsi ike nke mmemme ụfọdụ n'ihi enweghị ọba akwụkwọ na xfce (enweghị njikọta, mgbe ahụ).
Ma ọfụma, n'oge Gnome 2 gara 3, xfce gbutụrụ oge, ọ pụtara ihe ndọghachi azụ siri ike, ọbụlagodi taa m na-eche na ọ ka nọ n'azụ gnome, agbanyeghị ebe dị anya adịworị ntakịrị, mana ezughị iji dozie Iji ihe gburugburu ebe ahụ nwere ike inye m, ma ọ bụrụ na m na-ahụ na enwere nhọrọ na gnome3 iji jiri ụdị kpochapụwo: site na ịtinye-ihichapụ nke ogwe, ịdọrọ & dobe nke ngwa na ogwe, ịhazi ogwe ... ihe niile m nwere. gnome, ma site na nkwụsi ike na ọganihu nke gtk3 na gnome 3.4.x
Twing Mpekere dijo
Na kọmputa m 2006 (1gb nke Ram na isi 2 duo, eserese eserese) na ejirila m linux na nkesa dị iche iche (Open suse, fedora, ubuntu, chakra, elementary, Kubuntu, debian, ubuntu, agbalịrị m XFCE mana achọtara ya dị oke ntakịrị Ghara ikwu Openbox, E17, udi ahu nke na ewe otutu awa iji hazie ma dikwa ka odi na China maka onye amaghi ihe ndia. dị ọcha, mara mma na ngwa ya m hụrụ n'anya, mana ụjọ, dị nwayọ nwayọ na enweghị ike. Ọ nwere ike ịda ụda dị egwu mana enwere m mmasị ịnweta ihu dị mma ma dị mma na kọmpụta m, na-eji atụmatụ dị mfe ma dịkwa mfe.
Emechaa GNOME na nnwale na nnwale niile. Ọ bụ naanị ya na - anaghị akpụkọ akpụ akpụ, yana ọ kwụ ọtọ ma na-arụpụta ihe. Ọ gafere oke ịnụ ọkụ n'obi na ndị ọzọ mana ọ bụ naanị ya ka m nwere ike ịrụ ọrụ na-enweghị ndọpụ uche.
Enwere m ike ịnabata na ihe m kwuru nwere ike ịdị na-ewe iwe, mana echere m na ndị ọrụ Linux kwesịrị itinye uche ha na oge a, ịdị mfe, na gburugburu bụ maka mmadụ niile; enwere ike ikwu okwu, na ikike ahụ bụ naanị nke ga-eme ka anyị nwee ike ịkwalite teknụzụ ruo oge mmadụ. Ka kọmputa bụrụ oghere maka ezinụlọ niile.
Nna nna, nne ma ọ bụ ndị enyi naanị ndị maara Windows (ma ọ bụ ndị amachaghị kọmputa) nwere ike ịnụ ụtọ onwe ha na-enweghị atụ egwu ma ọ bụ amaghị ama.
Zaghachi ka iberi Twing
GNOME Shell abụghị maka onye ọ bụla na ahụmịhe onwe ya abụghị iwu ụwa niile.
Gnome 3 m kpọgidere n’isi. Ọ bụghị mmadụ niile nwere ike ị nweta otu ndị nwere ike ịgba Gnome xell. Echere m na Gnome gbara onwe ya ụkwụ. Ha nwere ike ọ dịkarịa ala nyere nhọrọ nke inwe ike ịga n'ihu na-eji desktọọpụ ochie mgbe nke ọhụrụ na-emebi. Mana ee e, e boro ha ebubo ịmanye onye ọrụ iji nke ọhụrụ n'abalị. Nsonaazụ .. Thegbọ elu nke ndị ọrụ gaa LXDE ma ọ bụ Nwunye.
Isi nsogbu bụ na a manyere anyị iji ihe na-adịghị anyị mma ma enyeghị anyị ihe ọzọ ma ọ bụrụ na ihe mmadụ chọrọ bụ ịga n'ihu na nkesa ọrụ. Cingmanye onye ọrụ ka ịgbanwee nkesa n'ihi na nke ị na-eji emechaala nkwado (Ugbu a… e nwere Gnome Classic. Birria ọzọ pụọ na nsogbu.) Na ihe niile na-egosi.
Gnome3 bụ nnukwu usoro ntanetị dị iche iche maka ige egwu, ikiri ihe nkiri, ma ọ bụ inetu ihe nchọgharị. Mbadamba 19-inch. Ọ bụ ya. Gaa mee ihe kwesiri inwe otutu ngwa na windo mepere emepe, mgbe ahụ ihe dị mgbagwoju anya, agaghị ekwe omume.Ọ bụ ya mere mkpesa na ọ naghị arụpụta. Ọ dịghị ma ọlị. Ghara ikwu Nautilus .. Enweghị m ike ịgbanye windo ndị ọzọ na windo, ma ọ bụ weghachite ha ihe dị mfe dịka nke ahụ. Ha kpebiri na windo kwesịrị ịdị ka nke a n'ihi na ọ bụ otu ha si daba. Ma ha anaghị ele m anya ọma maka na ihe odide ahụ na-anọ n’etiti. Ma m masịrị ya n'aka nri n'ihi na aka ekpe m ma ọ bụ na enweghị m ike ịhụ anya aka ekpe m ... Ha kpebiri na windo nke m na-arụ ọrụ kwesịrị ịnwe ihuenyo niile na ndị ọzọ m meghere adịghị mkpa, na ha na-egbochi. Na ndị maara ma ọ bụrụ na ha na-egbochi m ma ọ bụ na ọ bụghị? Gịnị ma ọ bụrụ na m chọrọ ịme nchịkọta ederede ma gụọ ya mgbe m na-ede ihe? M ga-anọnyere oke na aka m oge niile. Emepe emepe, iwelata, ịgbasa nọgidere, So?
Ha na-ekpebi ihe ga-adịrị m mma na ihe na-ekwesịghị, n’ihi na ha kwenyere na ọ bụ nke kachasị m mma. Dị ka a ga-asị na anyị bụ ndị nzuzu. Enweghị m ike ikpebi ihe m ga-eyi na nke m ga-ewepụ ma ọ bụrụ na ọ masịghị m. E nyekwara m iwu. Linux adịkwaghị enwere onwe ya mgbe Gome 3. Ọ bụrụ na gnome 3 na-enwe ọganihu ọ bụ n'ihi na ndị nkesa ndị kachasị ahọrọla ha yana Unity, nke ka njọ. Ọ bụghị n’ihi na ndị ọrụ n’ozuzu ha nabatara ya nke ọma. Ebuwo ya n'ike.
Ya mere mbughari site na Debian na Ubunu rue Mint ..
Na njedebe nke ọzọ KDE SC na-agbanwegharị ntụgharị mgbanwe na ịhazi ya.
MuPDF: ultra-fast and lightweight onye na-ekiri PDF
GIMP 2.8.2: nke izizi nke Mac OS X